Taorian’ny fanakatonan’ny COVID-19, atolotry ny Mozea Ghibli ny fitsidihana an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2020 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Italiano, Français, Deutsch, Español, русский, Ελληνικά, नेपाली, українська, Nederlands, Filipino, bahasa Indonesia, English
“Fivarotana tapakila Totoro” ao amin'ny Mozea Ghibli, Mitaka, Tokyo. Avy amin'ny mpisera Flickr chopperkuo. Lisansa: CC BY-NC-ND 2.0
Rehefa avy nihidy vonjimaika noho ny valanaretina COVID-19 dia manolotra ny fitsidihana virtoaly fohy ao amin'ny YouTube ny iray amin'ireo toerana tian'ny mpizahatany malaza indrindra any Japana.
Any Mitaka, tanàna itatra feno ravimaitso tokony ho roapolo minitra miala any andrefan'i Tokyo afovoany raha mandeha fiarandalamby no misy ny Mozea Ghibli izay tsy natokana ho amin'ny famoronana indray ny tontolon'ny sarimiaina fotsiny, fa natao ho amin'ny fizotra artistikan'ny studio ihany koa.
Anisan'ny sarimihetsiky ny Studio Ghibli ny “My Neighbor Totoro” sy ny “Spirited Away” notontosain'i Hayao Miyazaki izay malaza amin'ny mpijery manerana izao tontolo izao. Isan-taona, manintona mpitsidika an'arivony ny mozea ary voafetra ny fidirana. Mpitsidika vitsivitsy ihany no mahazo miditra ao amin'ny mozea isan'andro ary tsy maintsy fandrihana volana maromaro mialoha ny tapakila.
Nakatona nanomboka tamin'ny 25 Febroary ny mozea. Taorian'ny fizarana tokotanin-tsehatra ho amin'ny fihaonana an-tserasera azo ampiasaina maimaimpoana hanampiana ny olona izay tsy maintsy mijanona miasa any an-tranony dia nikarakara fitsidihana an-dahatsary fohy ny Mozea Ghibli ny Ghibli Studios.
Manomboka any antokotanin'ny mozea ny lahatsary fitsidihana andiany dimy ary mitohy any amin'ny efitrano samihafa sy ny fampirantiana isankarazany.
Mampiseho “aingam-panahy ho an'izay hiseho amin'ny singa-taratasy fotsy [mbola hosoratana] eo ambony latabatra izay ho lasa fiavian'ny sarimihetsika” ny efitrano “Aiza no ahaterahan'ny Sarimihetsika”.
Azo jerena ao amin'ny fantsona YouTube ofisialin'ny Studio Ghibli ireo lahatsary andiany dimy rehetra ireo.
Nandefa fitsidihana somary lava kokoa mampiseho ny Mozea Ghibli ilay YouTuber CocoTak, ao anatin'izany ny dia avy any amin'ny Gara Mitaka: